April 9, 2021 - Babal Khabar
Apr92021 by EditorNo Comments
राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्षमा पुनःनिर्वाचन भए लगत्तै चित्रबहादुर केसीले गरे यस्तो घोषण
तिलोत्तमा — राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सबै वामपन्थी मिलेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि शुक्रबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले ओलीलाई हटाएर वामपन्थीकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न आवश्यक रहेको जनाए । 'प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार बनाउन बाटो सफा गरिदिनुपर्छ’, उनले भने, ‘संसद्‌मा रहेका वामपन्थी शक्तिको एकताबाटै नयाँ सरकार बन्नुपर्छ ।' देशमा उत्पन्न पछिल्लो राजनीतिक अन्योल तथा अस्थिरताको कारक प्रधानमन्त्री ओली नै रहेको उनको आरोप छ । संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाउँदै विभिन्न नाटक रचेर ओलीले फेरि मध्यवधि निर्वाचनतर्फ मुलुकलाई लैजाने खेलमा लागेको बताए । ‘बाह्य शक्तिको जुट मिल्न नसक्दा मुलुकमा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएको छ,’ केसीले भने, ‘राष्ट्रियतालाई खलल पुर्‍याउने तत्त्वसँग साँठगाँठ गरेर सरकार बनाउने हो
कुलमान गएपछि कसरी हवातै बढ्यो विद्युत चुहावट , बिजुली चोर्ने को ? (भिडियोसहित)
गर्मी लागेसागै हुकिङ तथा बाइपास गरेर बिद्युत चोरी गर्ने क्रम बढेको छ। खासगरी प्रदेश दुई र वाग्मती प्रदेशमा चुहावट १ प्रतिशतले चुहावट बढेको हो। जनकपुर वितरण केन्द्रअन्तर्गत बारा, पर्सा, सप्तरी र सर्लाहीमा चुहावट बढेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रदेश २ मा एक वर्षअघि चुहावट १५ प्रतिशत थियो । अहिले बढेर १६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै बागमती प्रदेशको चुहावट ७ प्रतिशतबाट बढेर आठ प्रतिशत पुगेको छ । यो प्रदेशमा खासगरी भक्तपुर र ललितपुरमा चुहावट बढेको हो । चोरी बढेको थाहा पाएर पनि प्राधिकरणले प्रभावकारी कदम भने चालेको छैन । उसले चुहावट रोकथाममा कोरोना महामारीको बहानाबाजी गरेको छ । जबकि अहिलेको चुहावट कायमै रहे प्रदेश २ मा मात्र प्राधिकरणलाई ७० करोड रुपैयााको क्षति हुन्छ । असारसम्म प्राधिकरणको चुहावट १० दशमलव २८ प्रतिशत थियो । माघ मसान्तमा बढेर ११ दशमलव दुई आठ प्रतिशत पुगेको छ । जबकि चुहा
पशुपतिनथले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, चैत्र २८ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल चैत्र २८ गते शनिबार इश्वी सन २०२१ अप्रिल १० तारीख चैत्र कृष्णपक्ष चतुर्दशी तिथी पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र पश्चात उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र ब्रम्ह योग भद्रा करण चन्द्रमा मिन राशिमा आनन्दादि योगमा सौम्य योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण बसन्त ऋतु दर्शश्राद्ध,निशिबार्ने, घोडेजात्रा,भद्रकालीपीठमालिङ्गो उठाउने(ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) सकरात्मक सोचको कारण सामुहिक दाहित्व हात लाग्नेछ । जिबन साथिको सहयोगले अचल सम्पति प्राप्तिको योग रहेको छ । मित्र सगँको अति सामिप्यता कष्टकर रहला । मनोरञ्जनको क्षेत्रमा समय र धन खर्चनु पर्नेछ ।स्वास्थ सम्बन्धी सामान्य समस्याले मनमा तनाब उत्पन्न गराउन सक्ला । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) अप्रत्यासित मित्रजन सगँको भेटले मन प्रफुल्लीत रहनेछ । नयाँ कार्यको थालनिलाई नयाँ योजनाको आवश्यक
माधव कुमार नेपालले आफुहरू यस कारण ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने खुलासा
विराटनगर । एमालेका नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफुहरू वामपन्थीकै सरकारको पक्षमा रहेको र ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ । शुक्रवार विराटनगरमा संचारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै नेता नेपालले पार्टीलाई संगठित गर्न ओली नै सक्रिय हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले एमालेलाई ०७५ साल जेठ २ गतेको पूर्ववत् अवस्था ल्याइए पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुन सक्ने बताउनु भयो । उहाँले आफुहरु पार्टी भित्र संगठित हुन नसकेकाहरुलाई संगठित गर्ने अभियानमा लागेको र पार्टीलाई टुक्रयाउनुभन्दा पनि पुनर्गठित गर्न जुटेको बताउनु भयो । एक प्रश्नको जवाफमा नेता नेपालले कानुनी बाध्यताका कारण सांसद र जनप्रतिनिधिहरुलाई समानान्तर समितिहरुमा पुनसंगठित गर्न नसकिएको धारणा समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
अब प्रचण्डसग युद्धकालको सब हिसाबकिताब हुन्छ – रायमाझी
बुटवल – नेकपा स्थायी कमिटि सदस्य तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले युद्धकालका अर्बौँ रकमको हिसाबकिताब गर्ने समय आएको बताएका छन्।बुटवलमा पूर्व जनमुक्ति सेना नेपालको राष्ट्रिय भेलामा उनले ती लगायत युद्धकालका धेरै विषयको हिसाबकिताब हुने बताए। ‘१९ हजारको नाम राखेर ३४ हजारको नाममा ल्याएको पैसा कहाँ गयो ? उनले भने, ‘हामी अहिले वैचारिक र राजनीतिक संघर्षका क्रममा छौँ, तर सोध्नुपर्ने बेला आएको छ, १९ अर्ब कहाँ गयो, प्रचण्डले जवाफ दिनुपर्छ।’ उनले प्रचण्ड र माधव नेपालले आन्दोलनको नाममा सडकमा उटपट्याङ गरिरहेको टिप्पणी गरे ‘पार्टीको नेता भएर विवाद मिलाउने हो कि सडकमा जाने हो?, पार्टीभित्रै मिलाउनुपर्दैन, उनले भने, ‘उहाँहरू विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न छाडेर पद, शक्तिका लागि सडकमा जानुभो, साथीहरूले बाटो बिराउनुभएको छ।’
नेपालमा लकडाउन भैहाल्दैन : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी
काठमाडौँ / स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोभिड–१९ रोकथामका लागि सरकार लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले लकडाउन भन्दा अगाडी गर्नुपर्ने सबै किसिमका प्रभावकारी कदमहरु चाल्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपाल हेल्थ कनक्लेभ २०२१’मा बोल्दै मन्त्री त्रिपाठीले नेपाल अब कहिल्यैपनि लकडाउनमा नजाने बताएका छन् । लकडाउनले कोभिड नियन्त्रण गर्न कम हुने भएपनि सामाजिक जनजीवन र अर्थतन्त्रमा दिर्घकालीन असर पार्ने भएकाले सरकार लकडाउनमा जाने मनस्थितिमा नरहेको बताए । छिमेकी मुलुकमा कोभिडको नयाँ लहर आएकाले नेपालले सीमा नाकामा एन्टीजेन परीक्षण शुरु गरेको पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताए । यस्तै सीमा नाकामा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताउँदै कोभिडका कारण आतंकित नहुन पनि आग्रह गरे ।
कसरी कमाए १० वर्षको बच्चाले हरेक महिनामा १८ करोड ! हेर्नुहोस् ।
र्मले परम्परागत क्यारियरलाई पछाडि धकेली दिएको छ । यसको उदाहरण हो रायल काजी । जम्मा १० वर्षको यो बच्चाले केही वर्ष अगाडि डिजिटल क्यारियर सुरु गरेका थिए र आज अरबौँको मालिक भएका छन् । सन् २०१५ मा रायल काजीले आफ्नो युट्युब क्यारियर सुरुवात गरेका थिए । रायनले युट्युबमा खेलौनाको रिभ्यूको भिडियो हाल्न सुरु गरे । उस्ले आफ्नो आमालाई सबै बच्चाहरु युट्युवमा छन् म चै के गरेर बस्नु भन्दै गुनासो गरिरहन्थे, जस्को फलस्वरुप आज उनी सफल भए । त्यस पछि रायनको डिजिटल यात्रा प्रारम्भ भयो । अमेरिकाको टेक्ससमा बस्ने रायनको भिडियो रिभ्यूको तरिका मानिसहरूलाई ज्यादै नपरेकोले उनको फ्यान व्यास ज्यादै बढ्न लाग्यो । रायको लोकप्रियता ३ वर्षमा चरम सीमामा पुगिसकेको थियो । यी ३ वर्ष २०१८, २०१९ र २०२० मा उनी युट्युबमा सबै भन्दा धेरै कमाई गर्ने यूट्यूवर भएका थिए । रायल काजी युट्युबमा खेलौना र गेम्स् को अनवक्स गर्छन् र त्य
सरकारले दिएको पदकमा नयाँ नक्सा नराखिनुमा यस्तो रहिछ कारण हेर्नुहोस् ।
२७ चैत, काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार शीतल निवासमा राष्ट्रका विभिन्‍न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएकाहरुलाई विभिन्न मानपदवी, अलङ्कार र पदक वितरण गरिन् । सरकारबाट पाएको पदकसहित सम्मान पाएकाहरुले शुक्रबार आफ्नो तस्वीर सामाजिक सञ्‍जालमा राखे, जहाँ प्रदान गरिएको पदकमा नेपालले गत वर्ष अनुमोदन गरेको नयाँ नक्सा देखिएन । संसदले समेत अनुमोदन गरेको उक्त नक्सामा सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लामा पर्ने कालापानी, लिपुलेकसहितको भूमि पनि समेटिएको छ । तर शुक्रबार वितरण भएको पदकमा नयाँ नक्सा नदेखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘चुच्चे नक्सा खै’ भन्ने प्रश्न उठेको छ । नयाँ नक्सा किन नराखेको भन्‍ने प्रश्‍नमा गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा भन्छन्, ‘यो पोहोर सालकै पदक हो । कोरोनाका कारण दिन पाइएको थिएन । पोहोर पदकमा पहिल्‍यै छापिएर आइसकेकाले फेर्न मिलेन ।’ उनका अनुसार यो पदक २०७६ सालमा घोषणा
कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर अघि बढ्ने अवस्था नरहेको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यकर्तालाई दिए यस्तो निर्देशन
काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर अघि बढ्ने अवस्था नरहेको भन्दै चुनावी तयारीमा लाग्न सबैलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आग्रह गरेका छन् । नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन संघको राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनको शुक्रबार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले संरकार गठनमा कांग्रेसले नेतृत्व नलिएको भनेर विरोध वा टिप्पणी गर्नुपूर्व संसद्‌मा कांग्रेसको उपस्थितिलाई बुझ्न आग्रह गरे । उनले संसद्‌मा आफूहरुको संख्या कम भएको र सरकार गठनका लागि अरुलाई आग्रह गर्दा पनि कसैको सहयोग नपाएको दुखेसो पोखे । उनले भने, 'प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने संख्या हाम्रो पुगेन । पार्लियामेन्टमा हाम्रो संख्या नपुगेर हामीले बोलाउन सकेनौं । यो वास्तविकतालाई बुझ्नु पर्‍यो सबैले ।' विभिन्न किसिमका टीकाटिप्पणी भन्दा पनि वास्तविकताको धरातलमा बसेर काम गर्नुपर्नेमा उनले सबैलाई आश्वस्त तुल्याए । संसद्‍मा भएक
सफलता प्राप्त गर्न मुकेश अम्बानीका यी ८ सुत्र पछ्याउनुस्
धनी बन्न मुकेश अम्बानीका यी ८ सुत्र पछ्याउनुस् १९ अप्रिल १९५७ मा भारतमा जन्मिएका मुकेश अम्बानी संसारकै धनाढ्य व्यक्तिको सूचीमा पर्छन् । उनले बाबुले कमाएको धनलाई मेहनत र लगनशिलताका कारण नयाँ उचाई दिए । अहिले उनी थुप्रै युवाहरुको प्रेरणाका स्रोत हुन् । ‘दौडको बीचमा आराम गर्नेहरुलाई सफलता प्राप्त हुँदैन, प्रतिस्पर्धी बजारमा कसैले कसैलाई पर्खदैन’ भन्ने सिद्धान्त लिएर ब्यवसायमा होमिएर सफलता हात पारेका उनले धनी कसरी बन्ने भनेर केही टिप्स दिएका छन् । उनको केही धनि बन्ने सुत्र हेरौं अनि मनन गरौं, जसले तपाईंको जिवनमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ । – प्रतिस्पर्धी बजारमा कसैले कसैलाई पर्खदैन । – यदि कुदै दौडमा हुनुहुन्छ र त्यसलाई पुरा नगरी बीचमा आराम गर्नुभधयो भने सफलता प्राप्त गर्न सकिदैन । – कुनैपनि विजनेशको प्रवद्र्धन गर्नका सबैभन्दा पहिले बजारको माग बुझ्न जरुरी छ । – पैसा–पैसा भनेर त्यसको पछाड